Global Lives: Mijery indray ny tetikasa mandrakitra ny fiainan’ny olona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2019 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Español, বাংলা, English
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Jolay 2010)
Roa taona lasa izay, nanoratra momba ny tetikasa iray tany ampiaingana izahay: Napetraka ny Global Lives mba handrakitra andro iray eo amin'ny fiainan'ny olona 10 avy amin'izao tontolo izao. Androany isika dia hijery indray ny tetikasa ary hanamarina ny fomba fiaviany.
Ny volana febroary, nanatontosa ny alin'ny fisokafana tao San Francisco ny Global Lives Project ho fametrahana ny lahatsarin'izy ireo izay nandefasana mivantana ireo lahatsary maharitra 24 ora an'ireo mpandray anjara 10 tsirairay ka afaka misafidy mandehandeha eny amin'ny efitra rehetra ny olona na hijery ny lahatsary koa. Ity manaraka ity ny lahatsarin'ny alin'ny fisokafana:
Ao amin'ny tranokalan'izy ireo, afaka mijery fizarana fohy tamin'ny andron'ireo lohahevitra tsirairay ary koa ny pejy biografika ianao. Ohatra amin'izany i Dadah, mpiasa ara-pambolena sady renim-pianakaviana avy ao an-tanànan'i Sarimukti any Indonezia: Ao amin'ny pejy misy ny mombamomba azy, afaka mahafantatra momba ny fiainany, ny fianakaviany sy ny mombamomba ireo ekipa mpamokatra sarimihetsika ianao ary avy eo mijery lahatsary fohy miaraka amin'ny dikanteny amin'ny fiteny maro samihafa mampiseho antsika ny ampahany amin'ny fiainany andavanandro.
Azonao atao ihany koa ny mahafantatra an'i Zhanna Dosmailova ao Vannovka, Kazakhstan. Ankizy 5 taona monina miaraka amin'ny fianakaviany ao amin'ny trano fitaizana zaza kamboty tantanin'izy ireo. Ankoatra ny tantara fohy sy ny horonantsary fohy, dia misy ihany koa ny slideshow misy ireo sary nalaina nandritra ny tafatafa tamin'ny fianakaviany sy nandritra ny andro nanaovana ny horonantsary.
Misy biografia 8 hafa misy lahatsary ao amin'ny tranonkala, manasongadina ny fiainan'ny olona 10 avy amin'ny toerana samihafa eran'izao tontolo izao, sy avy amin'ny sarangam-piainana maro samihafa: ny niaraka tamin'i Zhanna sy Dadah dia i Israel Feliciano avy any Brezila, Dusan Lazic avy any Serbia, James Bullock avy any Etazonia, Muttu Kumar avy any India, Kai Liu avy any Shina, Rumi Nagashima avy any Japana, Edith Kaphuka avy any Malawi sy Jamila Jad avy any Libanona. Azonao atao ny mijery ny endrik'izy ireo ao amin'ny sarintanin'ny Global Lives, na mijery ny lahatsary sy mijery ny mombamomba azy ireo.
Ahoana no fizotran'ny fanatontosana ny horonantsary momba ireo fiainana ireo? Mitondra antsika amin'ny fizotrin'izany ny lahatsary iray nataon'ny ekipa Breziliana Global Lives, manazava ny maha-zava-dehibe ny antsipiriany rehetra izay mety ho adinon'ny olona vaovao amin'ny lahatsary, toy ny fitadiavana mpitari-dalana eo an-toerana, famaritana ny zava-mitranga isan'andro, manomana ny hazavana mandritra ny alina na ao an-trano ary ny endrika famoahana ho an'ny rehetra miseho amin'ny lahatsary.
Azonao atao ny manaraka ny tetikasa Global Lives ao amin'ny twitter @globallives, misoratra anarana ao amin'ny fantsona YouTube na miaraka amin'izy ireo ao amin'ny Facebook. Na izany aza, raha manam-bitana mety ho any Londra amin'ny faha-22n'ity volana ianao, dia hevero ny hijery ny tetikasa mivantana satria handefa ny lahatsary izy ireo ary hilaza momba ny Tetikasa Global Lives.